Maxaa ka soo kordhay dhismaha Golaha Wasiirada iyo is mari waagii ka taagnaa ? – Xeernews24
Maxaa ka soo kordhay dhismaha Golaha Wasiirada iyo is mari waagii ka taagnaa ?
19. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Xasan Kheyre ugu dambeyn isku raaceen liis meel dhaxaad ah oo sida la sheegay la isu tanaasulay.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in la isku afgartay in meesha laga saaro shaqsiyaadka ay kala wateen madaxda, isla markaana kuwo kale oo ku heyb ah lagu bedelo.
Waxyaabaha la isku haayay oo ay ka mid ahayd in Golaha Wasiirada laga dhigo wejiyo ku cusub siyaasadda iyo in xubno horay xilal horay u soo qabtay lagu soo daro ayaa hada meel dhexaad la isugu yimid.
Muranka ugu badan ee ka jiray dhismaha Golaha Wasiirada ayaa ahaa qaabka awood qeybsiga iyo cida loo magacaabayo Xilalka Wasaaradaha Muhiimka ama ugu tunka weyn.
22 ka bishan ayaa lagu wadaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo inuu u socdaalo dalka Kenya, inkastoo haatan ay taagan tahay xiisad ka dhalatay booqasho aan dowladda Soomaaliya ka war haynin oo Madaxweynaha Kenya ku tagay Magaalada Dhoobley, sidaas darteed safarkaas ka hor ayaa la qorsheeyay in Golaha Wasiirada lagu dhawaaqo.
Waxyaabaha isha lagu haaya ayaa waxay tahay cida loo dhiibaya Wasaaradda arrimaha dibadda, qofka xilkaas qabta ayaa looga baahan yahay inuu dhiso xidhiidh wanaagsan oo dhex mara wadamada Gobolka iyo Dowladda Farmaajo oo aan xidhiidhkoodu wanaagsanayn.
Muddo 11 cisho ayaa ka hadhsan mudada uu dastuurka u siinayo Ra’iisul Wasaaraha inuu ku soo magacaabo Xukuumaddiisa, oo ah 30 cisho, waxaana la dhowrayaa in Baarlamaanka uu ku horkeeno 30-ka bishan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/farmaajo-kheyre.jpg 430 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-19 13:29:492017-03-19 13:29:49Maxaa ka soo kordhay dhismaha Golaha Wasiirada iyo is mari waagii ka taagnaa ?
Khilaaf Ka Dhex Qarxey Waftigii Xukumadda Ka Tirsanaa ee Imaaradka Heshiiska... Qayb ka mid ah Magacyadi iyo degmooyinka ay u dhasheen Qaar ka mida ah dadkii...